Lamaody vita malagasy: mivelatra eo amin’ny iraisam-pirenena ny vokatra Pok Pok | NewsMada
Lamaody vita malagasy: mivelatra eo amin’ny iraisam-pirenena ny vokatra Pok Pok
Vokatra vita malagasy, natao tanana manontolo, nokajina hanana kalitao, fa indrindra, tsy manam-paharoa. Izay ny entin’ny Pok Pok misedra ny tsenan’ny lamaody iraisam-pirenena. Hanome lanja izay asa tanana vita malagasy izay indrindra ny tanjona, nanokafana ny vovonana Pok Pok, izay maneho, mivarotra ary manatitra ny vokatra any amin’ny mpanjifa maneran-tany. Mitondra fivoarana lehibe ho an’ny asa tanana sy ny lamaody malagasy izany satria vetivety ny fisandrahany eo amin’ny iraisam-pirenena. Vokatra hoan’ny vehivavy, toa ny kitapo vita zato isan-jato amin’ny akory avy eto Madagasikara aloha no misantatra ny ranty ao amin’ny www.pokpokmadagascar.com. Misy hisafidianana ao amin’ny sokajy roa, “Avana” sy “Diavolana”, izay azon’ny rehetra jifaina na aiza na aiza ny toerana.
“Mihavelona sy mihamivoatra ny hakanton’ny kolontsainay rehefa havoaka ho hitan’izao tontolo izao. Rehefa sendra ampihaonin’ny fiainana eny ho eny, anisan’ny maneho ny hamevan’izay kolontsainay izay i Pok Pok … Mino koa izahay fa ny fahatsorana ny mamoaka ny tena izy marina”, hoy ny dikan-teny tsotsotra, nanoloran’ireo niketrika ny vovonana.
Raha tsiahivina, teraka ny taona 2012 ny Pok Pok, noketrehin-dRandriamifidimanana Andrianina sy i Fitia. Ny taona 2019 kosa no nanomboka niketrika ny hidirana tsikelikely eo amin’ny sehatry ny tsena iraisam-pirenena izy ireo ka tonga amin’izao.